सलाद "Jumble" - छिटो र सहयोगी!
पहिलो "Jumble" सलाद सोभियत समयमा प्रकाशित, पुस्तक मा "को स्वस्थ र स्वादिष्ट भोजन को लाभ।" यो धेरै स्वस्थ व्यञ्जन प्रस्तुत गरेका थिए समावेश छ। पाठक गर्न विशेष रोचक छुट्टी तालिकाको लागि सलाद को एक किसिम थिए। तब देखि, हाम्रो पकवान विभिन्न परिवर्तनहरू भइरहेको छ। म धेरै Housewives एक सलाद "Jumble" तयार के आदर तिर्न पर्छ हुनत परम्परागत नुस्खा छ। तरकारी, यो समावेश छन् किनभने उसिनेर छैन र तला छैन व्यञ्जन को प्रयोग, एकदम स्पष्ट छ। त्यसैले तिनीहरू सबै आफ्नो पोषण मूल्य राख्ने। फलस्वरूप, सलाद मानव लागि धेरै उपयोगी। मूल नाम पकवान दिइएको किनभने यो तहहरू फैलाउन छैन र एकल चम्चा सबै भन्दा स्वादिष्ट र पौष्टिक आहार संयोजन गर्न हलचल। सलाद "Jumble" शरीर को जाडो beriberi पछि राज्य अनुभव गर्दा वसन्त मा गर्न उपयोगी छ, र गर्मी मा, यो पकवान तरोताजा हुनेछ जब, र अतिरिक्त सेना को vivacity दिनेछु। यो पकवान एकदम सरल छ। सबै उत्पादनहरु वर्ष को कुनै पनि समय मा पसलमा पाउन सकिन्छ। त्यसैले, हामी सलाद को एक सुन्दर र अनुपम गुण तयार गर्न आवश्यक के:
ताजा बन्दागोभी - 200 ग्राम
गाजर -3टुक्रा।
मासु - 200 ग्राम
सकरखण्ड -3टुक्रा।
क्यान्ड मटर -3चमचा।
सलाद "Jumble": नुस्खा
मासु परिभाषित गर्न सुरु गर्न। यस्तो मा एक सलाद मासु र पोर्क, चिकन वा बाछाको मासु रूपमा राख्न सकिन्छ। सामाग्री को धेरै भएकोले सलाद एक घण्टा बारेमा लाग्न सक्छ। तर, यो लायक छ, विश्वास मलाई। खाना पकाउने गरौं:
गाजर र बीट खुली र भद्दा grater मा RUB। एक अन्यथा तरकारी यसको रस को सबै गुमाउनु र तरकारी puree परिणत हुनेछ, चयन गर्न ठूलो खाडल एक grater पर्याप्त छ। जोश वा सलाद मात्र ताजा उत्पादनहरु समावेश किनभने, तलना तिनीहरूलाई आवश्यक छैन।
यसलाई लागू गर्न सुविधाजनक थियो भनेर गोभी पात, साना स्ट्रिप्स मा कटौती गर्नुपर्छ। shredded बन्दागोभी एक पटक, यो एउटा सानो नुन र Mash थप्न। यसरी, यो नरम हुन्छ र नुन अवशोषित।
लिन-बोसो मासु टुक्रा र मसाले यसलाई जोश। तपाईं उपलब्ध पकाएको मासु छैन भने, तपाईँले यसलाई salami वा sausages प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। सत्य के तपाईं अलि फरक स्वाद प्राप्त छ, त्यसैले यसलाई सबै नै मासु प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।
आधा छल्ले मा कटौती प्याज, तीतो स्वाद छैन ताकि, उम्लिरहेको पानी मा भिजेको र त्यसपछि सलाद थप्न। तपाईंले प्याज को तीता हटाइएको छ, नुन गर्न, अन्यथा सलाद पनि नूनिलो हुनेछ आवश्यकता छैन।
क्यान्ड हरियो मटर र मेयोनेज को spoonfuls को एक जोडी थप्नुहोस्। सलाद ताजा तरकारी को पूर्ण भएकोले मेयोनेज धेरै आवश्यक छैन।
राम्ररी सबै मिश्रण। खुलारूपमा एउटा सानो जमीन मरिच थप्नुहोस्।
को "Jumble" सलाद सुशोभित गर्न, तपाईं, जैतून को एक जोडी लाग्न सक्छ, pitted स्लाइस तिनीहरूलाई कटौती र माथि राख्नु। सलाद साथै सजावट लागि प्लेट जैतून वा सलाद पात, एक सिङ को तरिका मा जोडेको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं खाना को स्वाद र पोषण गुणस्तर मूल्यांकन छौँ मलाई विश्वास छ,!
भोजमा मा छाँट्दछ संग सलाद फिट
Meatless सलाद Commemoration: व्यञ्जनहरु। तरकारी सलाद
जाडो सलाद Recipe
विवाह को लागि मूल सलाद
स्वादिष्ट आलु सलाद
कसरी युवा राख्न? अर्थ "लौरा" (ट्याब्लेट) महिला मद्दत गर्छ
को यूएई मा बीच बिदा - एक अविस्मरणीय अनुभव गर्न आफैलाई व्यवहार
हन्ना Arendt: जीवन र कार्य
Konstantin Frolov - जीवनी र काम
बुद्धि दाँत: "आठ" को दुखाइ हटाउन चाहे?
सलाद 'ग्रीक' र यसको इतिहास
कुनै पनि चंद्र दिन आफ्नो कपाल काट्न राम्रो छ? एक केश लागि अनुकूल दिन